Mabhuku aJavier Castillo, the suspense thriller at its finest | Zvazvino Zvinyorwa
Mabhuku naJavier Castillo.
Mumakore mana apfuura, mabhuku aJavier Castillo akakonzera kusagadzikana, mune ese ari maviri uye epanyika mabhuku ezvepanyama. Achiwana kutengesa kupfuura makopi mazana mana emazana, munyori mutsva uyu akawana izvo chero munyori angade pakutanga kwebasa rake.
Uye hongu, murume uyu anobva kuMalaga, asina kana makore 27 okuberekwa panguva iyoyo, yakakwanisa kuzvimisa pachayo muna 2014 - uye kwemazuva anopfuura mazana mashanu - paAmazon's Kindle Direct Publishing chikuva neruzivo rwake rwekutanga mumadhijitari fomati, Zuva iro pfungwa dzakarasika (2014). Kubva ipapo, ivo vanhu kana vezvenhau havana kumira kutaura nezvake.
1 Chidiki chehupenyu hwaJavier Castillo
1.1 Mumwe murume wechidiki anobva kuMalaga ane tsika yekuverenga
1.2 Iko kuda kuenda kunhau yematsotsi kubva muruoko rwemudzidzisi mukuru
1.3 Iro rudo rweSpanish nhoroondo yenhoroondo
1.4 Iye bhizinesi chipangamazano nemweya wemunyori
1.5 Quarter century, iyo zera rekutanga iyo nyaya yaizovhura musuwo
1.6 Kugara pamwe nezvibereko zvayo
1.7 Iyo inonakidza rondedzero fomati
1.7.1 "Mini zvitsauko"
1.7.2 Vhara mutauro
1.7.3 Chinokatyamadza chirongwa chakanyatsotakurwa
1.8 Basa harina kuitwa
1.9 Iwo mafaro haamire
1.9.1 Zvese Zvakaitika kuna Miranda Huff (2019)
1.9.2 Ichando Musikana (2020)
2 Mabhuku aJavier Castillo
Chidiki chehupenyu hwaJavier Castillo
Mumwe murume wechidiki anobva kuMalaga ane tsika yekuverenga
Sezvo zita rayo rinoratidza, Javier Castillo akaona chiedza chenyika ino kekutanga muMalaga, Spain, muna 1987. Parizvino ane makore makumi matatu nematatu ekuberekwa. Chinhu chaaifarira chaainakidzwa nacho achiri mudiki achiverenga, varaidzo iyo, isingazive, yaizotaridza ramangwana rake padyo.
Iko kuda kuenda kunhau yematsotsi kubva muruoko rwemudzidzisi mukuru
Iye ainakidzwa nekuverenga zvekare, kunyangwe iye akasendamira kune yekuparwa nhoroondo, aine chaanofarira munyori Agatha Christie. Kubva pane iyi pfungwa yekunyora, chikamu chekurudziro yezvaizove basa rake.
Ichokwadi, Negritos gumi, na A. Christie, iro bhuku rakafuridzira Castillo kunyora nyaya yake yekutanga aine makore gumi nemana. Izvo zvaive zvatove kuzivikanwa, saka, iko dingindira rebasa remunyori mudiki uyu raive richinongedzera.
Iro rudo rweSpanish nhoroondo yenhoroondo
Nekudaro, munyori akazvizivisawo semunhu anoyemura Ildelfonso Falcones, uyo waanoona samwari. Uye kuonga kwake hakusi pasina, sezvo munyori we Kereke huru yegungwa y Fatima ruoko Inoonekwa nhasi seimwe yeanonyanya kutsikisa mabhuku echiSpanish ezvakaitika, uye bhuku renyika.
Iye bhizinesi chipangamazano nemweya wemunyori
Sekubata kwayakaita vazhinji, apo zviroto zvavo zvainge zvichitanga, Javier Castillo akadzidziswa muzvidzidzo zvebhizinesi, uye akabva aita dhigirii ra master mune manejimendi kuESCP Europe. Parizvino mubatsiri wemubatanidzwa.
Nekudaro, sezvaaidzidza nekugadzira ramangwana mune bhizinesi renyika, kuda kwake tsamba hakuna kupera. Akagadzira mifananidzo yezvaizove nyaya yake uye akafungidzira kuwanda kwaaizoisa muchirongwa cheanenge ari bhuku rake rekutanga.
Quarter century, iyo zera rekutanga iyo nyaya yaizovhura musuwo
Pazera ramakore makumi maviri neshanu, Javier Castillo anosarudza kutenderera pfungwa dzese dzaive dzichipenga mupfungwa dzake, mumifananidzo mizhinji nemadhizaini. Maitiro ese akapedza gore nehafu. Mushure mekuona yapera, haana kuzeza kupurinda masampuli mana ndokutumira kuvaparidzi vakasiyana.
Zvisinei, izvi ndizvo zvaaida kuti averengerwe, kuti agovane uyu wekutanga mwanakomana mutsamba, izvo haana kuzeza kuisa bhuku redhijitari muna2014 kune Kindle Direct Publishing chikuva. Mushure memavhiki, mashiripiti akapfuura. Sei uchitaura zvemashiripiti? Zvakanaka, kubatana kweruzhinji nebasa raCastillo kwaive nekukasira, zvekuti bhuku - uye rinofanira kucherechedzwa kuti raive rekutanga remunyori uye rakanga risati ramboburitswa zviri pamutemo - rakasara mazuva makumi mashanu nemakumi mashanu kuAmazon semutengesi. Ehe, izvo zvakaitika na Zuva rakarasika njere.
Kugara pamwe nezvibereko zvayo
Hazvina zvakawanda zveizvozvo zvakaitika apo vaparidzi vakati wandei vakasangana nemurume wechidiki kubva kuMalaga kuti bhuku rake rikwanise kuenda kunhandare chaiyo. Nekudaro, Javier akaramba akadzikama, uye mu2016 akasarudza kubvumirana neimba yekutsikisa yeSuma de Letras. Chisimbiso ichi chakagadzira kuburitswa kwepamutemo kwe Zuva iro pfungwa dzakarasika muna 2017, uye, sezvazvakaitika mumadhijitari fomati, kutengesa nemirwi hakuna kumirira.
Iyo inonakidza rondedzero fomati
Zvichida chikamu cheJavier Castillo's hitch munhoroondo yake - Zvakare pamwe nekuvapo kwesimba rekufungidzira rine simba rekudzokorora kuwanda kwakawanda muchirongwa- iko kushandiswa kwezvitsauko zvipfupi.
Tiri kutaura nezve chii Zuva iro pfungwa dzakarasika Ine zvitsauko zvinopfuura makumi masere, uye chimwe nechimwe chine chinobatika chayo chaicho iyo, kana yapera, inosiya muverengi achida kuziva zvinotevera. Mhedzisiro: zviuru zvevaverengi vakataura mumaonero avo kuti vakaverenga bhuku kamwechete, nekuti vaisakwanisa kusiiwa vasina chokwadi.
Imwezve inonakidza nhoroondo ndeyekuti, kunyangwe Javier Castillo, zera rake, aine muunganidzwa wakakura kwazvo wekuverenga uye anobata duramazwi rakapfuma kwazvo, rondedzero yake haisi kure kure, Kana. Mutauro waro uri padyo chaizvo, unosvika kumuverengi zvakananga. Ehezve, pasina kuregeredza kutaura kwakanaka uye nerondedzero yakadzama. Mumabhuku aJavier Castillo, zvese zvakadzama zvinoverengwa, uye anoita kuti vaverengi vazvinzwisise kwazvo.
Ehe, semudzidzi akanaka waAgatha Christie - Uye tarisa kuti kune vadzidzisi vakafa vanodzidzisa kupfuura vazhinji vapenyu--, hapana chinoudzwa chiri chaizvo zvazvinoita. Zvese, murondedzero yaJavier Castillo, zvine nhoroondo. Mutambo nemuverengi unova unonakidza zvekuti kana zvinhu zvikaitika, nekuti zvakangodaro, ndipo paunosvika pakupokana. Iko kune hoko, mukushamisika, uye kuita izvozvo, semunyori anotanga, ane zvakawanda zvakanaka.
Chinokatyamadza chirongwa chakanyatsotakurwa
Ichi ndicho chimwe chigadzirwa icho Javier Castillo ave achikwanisa kutakura chaizvo mushe mubasa rake. Kutora mupfungwa mufananidzo wemusoro wemusikana wechidiki akatakurwa mumaoko nemurume asina kupfeka, kushamisika uye kushungurudzika.
“Iawa gumi nembiri mangwanani musi waDecember 24, zuva rimwe chete Kisimusi isati yasvika. Ini ndinofamba ndichidzika nemugwagwa wakanyarara, ndichitarisa ndisina kana chinhu uye zvese zvinoita kunge zviri kufamba zvishoma nezvishoma. Ndinotarisa mudenga ndikaona maglobe mana machena achikwira akananga kuzuva. Pandinofamba, ndinonzwa kuchema kwevakadzi uye ndinoona kuti vanhu vari kure havamire kunditarisa. Kutaura chokwadi, zvinoita kunge zvakajairika kwandiri kuti vanonditarisa voshevedzera, shure kwezvose, ndakashama, ndakazara ropa uye ndine musoro mumaoko angu ”.
Aya ndomavambo aanotanga basa rake rekutanga. Zvimwe zvese ihovha inoputika maanosanganisa manzwiro erima nemibvunzo yetsika, simba rezvitendero uye kuti akanyatsopenga sei kana kupenga chaiko.
Chinhu chakanakisa ndechekuti inovhara iyo nyaya, senge mune yega mini chitsauko, ichisiya muverengi achida zvimwe, uye obva aunza chimedu chisipo muchikamu chake chitsva.
Basa harina kuitwa
Nepo kubudirira kweyekutanga posvo kwakamupa iye mibairo yakanaka, Javier akafunga kuenderera nebasa rake semubatsiri wezvemabhizimusi, iye zvino akazviwedzera nekutengesa kwake kwakatozivikanwa. Iyo yekutanga nyaya yakapa nzira kune vamwe avo vakapopota mukati memifungo yemunyori yekuiswa papepa. Izvo zvaive sezvizvi kuti mukuuya uye kuenda kubasa, iye achiri muchitima, bhuku rake rechipiri rakazvarwa.
Maive muna Ndira 2018 -Gore rimwe mushure mekuburitswa kwenyorwa yake yekutanga- zvakauya pachena Musi wakarasika rudo, zvakare kubva paruoko rweimba yekutsikisa yeSuma de Letras. Kubudirira hakuna kunonoka kuuya, nekuti nebasa iri munyori anovhara kutenderera kweanonakidza akataurwa munhoroondo yapfuura, yaidikanwa nevateveri vake. Iri basa raive pakati pegumi akanakisa e10.
Iyo rondedzero, senge yeyake yekutanga, yakachengeta fomula yekubudirira. Zviitiko zvisina kujairika, zvakavanzika zvisinganzwisisike, kugurwa misoro uye mutambo wepfungwa hazvina kumirira. Uye zvechokwadi, hapana zviri sezvaunotarisira.
Mutsara naJavier Castillo.
Chinhu chinonakidza ndechekuti nebhuku rino munyori anofunga kuvhara nyaya yacho, kunyangwe paine zvikumbiro zvakawanda zvekuti ndiitevere. Panyaya iyi, Javier Castillo anoratidza kuti zvaisazove zvakanaka, nekuti, sekupihwa kwazvakaitwa chokwadi, vaifungidzirwa, zvese zvinokwana, zvese zvakagadzirira.
Iwo mafaro haamire
Zvese zvakaitika na Miranda Huff (2019)
Rimwe gore mushure Musi wakarasika rudo Javier Castillo akaburitswa Zvese zvakaitika na Miranda Huff. Iyo Sum yeTsamba stampu inoenderera. Ichi chimwe chinonakidza, chete nyaya yacho iri nyowani uye nyowani uye inotaura zviitiko zvakakomberedza kutsakatika kwaMiranda Huff.
Mifananidzo iri mukati mebasa, iyo mifananidzo iyo Castillo inorondedzera, ichiri inotyisa uye inonzwisisika. Nekudaro, pasina kusiya parutivi ndege yekutamba kwepfungwa, munyori anoongorora hune hukama hwakanyanya muhukama muvakaroorana, izvo zvinenge zvisati zvambofumurwa, hongu, zvakaoma sei kuramba zvichikwira murudo rwechishuwo uye kuti zvakasvibisa uye zvisina hunhu sei. kuva pamwe chete.
Sezvazvakaitika nemabasa ake apfuura, zviuru zvekutengesa zvakakurumidza, uye kukura kwevateveri veCastillo semhedzisiro yekuendesa uku kwakaramba kuchikura.
Musikana wechando (2020)
Senge sekunge raive zano rekugadzira, rakabudirira kwazvo uye rakaitwa, muna 2020, Javier Castillo akatigamuchira Musikana wechando (Sum of Letters). Muchikamu chino chazvino, anotaura nezveimwe nyaya inonetsa, yekubiwa kwevana. Kumonyoroka kusingatarisirwi hakurevi kuuya, semibvunzo yekuti takachengeteka sei. Zvichida chinhu chakasimba kwazvo ichokwadi chinoswedera padhuze zvakanyanya: chakaipa chinogara chiripo mukona yega yega panonzwikwa izwi rekuti hunhu.
Parizvino, aya mabasa aJavier Castillo:
Zuva iro pfungwa dzakarasika (2017).
Musi wakarasika rudo (2018).
Zvese zvakaitika na Miranda Huff (2019).
Musikana wechando (2020).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Mabhuku aJavier Castillo
Mabhuku aElvira Lindo